ရက်စွဲများ: မွေးဖွား c ကို။ 390; FL ။ က c ။ 457 သို့မဟုတ်က c ။ 493
ပက်ထရစ်နှောင်းပိုင်းစတုတ္ထရာစု (ဂ။ အေဒီ 390) တွင်သူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်တဲ့အခါမှာပက်ထရစ်ရဲ့အဖေ, Calpornius, လူထုနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးရုံးများကျင်းပခဲ့တယ်။ မိသားစု Bannavem Taberniaei ၏ရွာ၌နေထိုင်ခဲ့ပေမယ့်ထဲမှာ ရောမဗြိတိန်နိုင်ငံ , ပက်ထရစ်တနေ့အအောင်မြင်ဆုံးခရစ်ယာန်အိုင်ယာလန်အတွက်သာသနာပြု၎င်း၏ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု နာယကသူတော်စင် များနှင့်ဒဏ္ဍာရီများ၏ဘာသာရပ်။
သူသည်အသက် 16 နှစ်မှာပြန်ပေးဆွဲခံရ (ကောင်တီ Mayo အဘိဓါန်န်းကျင်) အိုင်ယာလန်မှစေလွှတ်လျက်, ကျွန်အဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်။ ပက်ထရစ်သိုးထိန်းကဲ့သို့ရှိအလုပ်လုပ်ခဲ့နေစဉ်, သူကဘုရားသခင်၌နက်သောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ တစ်ညကသူ့အိပ်နေစဉ်သူမှလွတ်မြောက်ရန်မည်သို့ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒါအများကြီးသူသည်မိမိအ autobiographical အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည် "ဝန်ခံ။ "
ယင်းဘာသာရေးပညာရှင်တို့ကနာမည်တူ၏လုပျငနျးမတူဘဲ, သြဂတ် , ပက်ထရစ်ရဲ့ "ဝန်ခံ" ဘာသာရေးအယူဝါဒ၏အနည်းငယ်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အတူတိုတောင်းပါတယ်။ သူကခရစ်ယာန်မိဘများမှမွေးဖွားခဲ့သည်သော်လည်း, သူသည်မိမိအသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောရှေ့မှာကိုယ်ကိုခရစ်ယာန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူးထိုသို့ခုနှစ်, ပက်ထရစ်, သူ့ဗြိတိန်လူငယ်နှင့်သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းဖော်ပြသည်။
စာရွက်စာတမ်း၏နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်သူ့ယခင်ဘမ်းသွားချုပ်ပြောင်းအိုင်ယာလန်မှသူ့ကိုစေလွှတ်သောအလွန်ဘုရားကျောင်းသူ့ကိုယ်သူခုခံကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ပက်ထရစ်သူ၏ "ဝန်ခံ" wrote နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီသူတို့ဖမ်းမိခြင်းနှင့်များစွာသောသတ်မိသောကြောင့်, သူနတ်ဆိုး compatriots အဖြစ်သူ့ကိုနှင့်သူ၏စစ်သားများပြစ်တင်ရှုတ်ချထားတဲ့အတွက် Coroticus ဖို့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပေးစာ, Alcluid ၏ဗြိတိသျှဘုရင်က (နောက်ပိုင်း Strathclyde ခေါ်) ရေးသားခဲ့သည် အိုငျးရစျလူတွေဆရာတော်ပက်ထရစ်ရုံ၌ဗတ္တိဇံခဲ့သည်။
သူတို့မသတ်ဘဲသူတို့ "သာသနာပလူ" Picts နှင့်စကော့ထံရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ခံစားမှု, ဘာသာရေးနှင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိအဲဒီနှစ်ခုကိုအပိုင်းပိုင်းနှင့် Gildas Bandonicus '' ( "De Excidio Britanniae") "ဗြိတိန်၏ပျက်စီးခြင်းကိုရည်မှတ်" ဖြစ်သော်လည်းပဉ္စမရာစုဗြိတိန်နိုင်ငံကအဓိကသမိုင်းဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်သည်။
အပျေါမှာ ပက်ထရစ်ရဲ့ထွက်ပေါက် ကိုကျွန်ခံနေရာကသူ့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခြောက်နှစ်ကနေသူပြန်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့သွားကြ၏, ပြီးတော့သူကစိန့်အောက်မှာလေ့လာခဲ့ဘယ်မှာ Gaul မှ
ဗြိတိန်နိုင်ငံကမှတဖန်ပြန်မီ 12 နှစ်များအတွက်ဂျာမိန်း, Auxerre ၏ဘိရှော့။ အဲဒီမှာသူကအိုင်ယာလန်မှခရစ်ယာန်သာသနာပြုတစ်ဦးအဖြစ်ပြန်လာမယ့်ခေါ်ဆိုမှုခံစားရတယ်။ သူ၌ဗတ်တိဇံနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများတက် setting, converting နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 30 အိုင်ယာလန်နေ၏။
> Sub-ရောမဗြိတိန်နိုင်ငံ: တစ်ခုကနိဒါန်း
> Gildas: ဗြိတိန်နိုင်ငံ (De Excidio Britanniae) ၏ပျက်စီးခြင်းကိုရည်မှတ်ခြင်းမှ
> အလယ်ခေတ် Sourcebook အခန်းကြီးဗြိတိန်၏ကျဆုံးခြင်းအပေါ် Gildas '' အလုပ် 23-26 မှစ. ။
Gildas အပေါ်> Ecole ဝေါဟာရ entry ကိုပညာရှိ
စိန့်ပက်ထရစ်သူအစောပိုင်းသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောမှ attributes တစ်ဦးအချက်ကိုကောင်းစွာပညာတတ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထိုကြောင့်, ကသူအိုင်ယာလန်မှသာသနာပြုအဖြစ်စေလွှတ်တော်မူခဲ့ကွောငျးအခြို့သောတွန့်ဆုတ်အတူရှိ၏, သာပထမဦးဆုံးသာသနာပြုပြီးနောက်, Palladius သေခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ shamrock နှင့်သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏သုံးရွက်အကြားလိမ္မာပါးနပ်နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အတူတက်လာသည်ဟုသူ့သိုးနှင့်အတူ Meadows ၌သူ၏အလွတ်သဘောကျောင်းပညာရေး၏ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်နှုန်းမှာမှာဤသင်ခန်းစာစိန့်ပက်ထရစ်တစ် shamrock နှင့်ဆက်စပ်အဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
စိန့်ပက်ထရစ်လည်းအိုင်ယာလန်ထဲကမြွေကားမောင်းအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ အဲဒီမှာသူ့ကိုနှင်ထုတ်ရန်အဘို့အအိုင်ယာလန်မမြွေဖြစ်ကောင်း ရှိ. , ကပုံပြင်သင်္ကေတဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးသည်။ သူတပါးအမြိုးသားကူးပြောင်းကတည်းကမြွေအယူမှားယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ်မကောင်းသောအများအတွက်ရပ်တည်ရန်စဉ်းစားနေကြသည်။ သူကသင်္ဂြိုဟ်လေ၏ဘယ်မှာနက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာအနက် Glastonbury မှာစိန့်ပက်ထရစ်တစ် Chapel သူရှိ interred ခဲ့သည်ဆိုပါတယ်။ ကောင်တီ Down, အိုင်ယာလန်အတွက်တစ်ဦးကနတ်ကွန်း, ကလေးမွေးဖွားမှုအတွက်မေတ္တာရပ်ခံသောသူတော်စင်တစ်ဦးမေးရိုးအပိုင် epileptic ကိုက်ညီတဲ့, နှင့်မကောင်းသောအမျက်စိရှောငျလှဲဖို့ရန်ဆိုပါတယ်။
သူမွေးဖွားသို့မဟုတ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်အတိအကျသောအခါကြှနျုပျတို့မသိကွပါပေမယ့်, ဒီရောမဗြိတိန်သူတော်စင်စစ်ရေးပြ, အစိမ်းဘီယာ, ဂေါ်ဖီထုပ်, corned အမဲသား, နှင့်အထွေထွေရွှင်လန်းနှင့်အတူမတ်လ 17 ရက်နေ့တွင်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, အိုငျးရစျအားဖွငျ့ဂုဏ်ပြုသည်။ စိန့်ပေါ်တစ်ဦးပွဲတော်တစ်ခုရက်သတ္တပတ်၏ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးအဖြစ် Dublin အတွက်ချီတက်ပွဲ, အိုငျးရစျပှဲရှိစဉ်အခါ
2001 ခုနှစ်တွင် NS Gill ကရေးသား။
ပေါ်တူဂီသမိုင်းအတွက် Key ကိုအဖွဲ့
ယေရမိက O'Donovan Rossa
Letizia Bonaparte: နပိုလီယံ၏မိခင်
ဖိလစျအထွေထွေအန်တိုနီယို Luna ၏ဘဝနှင့်အမွေအနှစ်
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Disraeli: ဝတ္ထုရေးဆရာနှင့်ဗြိတိန်ကဤသို့
19 ရာစု၏ကျော်ကြား Duels
မိသားစုတိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ဂရိတ် Classic ရုပ်ရှင်
ထိပ်တန်း 10 ဝမ်းနည်းပေါ့ပ်သီချင်းများ
အဆိုပါ Am-Am ဂေါက်သီး Format ကိုရှင်းပြ
လုဒိမာရီယာကလေး: မြစ်ကျော်နှင့် Wood ကမှတဆင့်
ဆန်ဖရန်စစ္စကို GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
လူမှုလေ့လာရေးအစီရင်ခံစာ Card ကိုမှတ်ချက်
ယဉ်ကျေးမှုဂေဟဗေဒ - ထိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူသားတွေဟာချိတ်ဆက်ခြင်း
ဘယ်လိုအကြောင်း NHL သည့်အကြောင်း NHL ရပ်တစ်တွဲချည်ချိုးပါသလား?
ထိပ်တန်း 20 အီတလီကလေးအမည်များ
အီတလီကြိယာ conjugation: Fumare
ကျားမတန်းတူရေးအပေါ်မင်းသမီး Emma Watson ဟာရဲ့ 2014 ခုနှစ်မိန့်ခွန်း